Qabsoon Bilisummaa Oromoo eessaa ka’ee garamitti deemaa jira? Kutaa 20ffaa -
By fmegersa | June 9, 2018
Berhanu Hundee, Waxabajjii 8, 2018
Barreeffama kutaa kana keessatti mee akka waliigalaatti mooraa Qabsoo Bilisummaa Oromoo (QBO) fi addatti immoo mooraa Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) laalchisee dhima yeroo dheeraa gaafii na keessatti uumaa ture tokkon kaasuu barbaada. Dhimma kana immoo bakkee (iddoo) saditti baaseen laaluu yaala.
(1) Mooraa ABO keessatti maaliif addaanbahinsi yeroo adda addaa uumamaa akka as gahee fi sababa kanaan gareeleen heddooman
(2) Jaarmayootni Oromoo warri kaayyoo fi galii tokko ykn walfakkaataa qaban maaliif tokkoomuu akka dadhaban
(3) Mooraan QBO maal ta’uuf akka deemu fi dhiibbaan uummata Oromoo fi addatti kan Qeerroo jaarmayoota keenyarratti maal ta’uu akka qabu
Duraan dursee, wanti ani dubbistoota barreeffama kanaa hubachiisuu fedhu, ani rakkoolee mooraa QBO fi ABO keessa jiran hin beeku garuu akka hubannoo kiyyaatitti yaada fi ilaalchan qabu ibsuufi. Barreeffamni kun yaada malee waraqaa qorannoo (research paper) akka hin taanes asuman beeksisuun barbaada.
1) Mooraa ABO keessatti maaliif addaanbahinsi uumamaa as gahee, sababa kanaan gareeleen heddooman?
Akka warri keessa beekan dubbatanitti, moraa ABO keessa ijaarsuma jaarmayaa kanaarraa kaasee rakkooleen bifa adda addaa jiraachaa akka turan himama. Sana hundaa seenaaf dhiisuudhaan, mee waanuma bara 1992 booda mul’achaa as gaherraa hubannoo kiyya ibsuun yaala.
Akkuma beekamu addaanbahinsi inni duraa kan uumame bara 2001 yoo ta’u, yeroo sana ABOn bakkee lamatti bahee; gareen tokko maqaa ABO Qaama Ce’umsaa (ABO QC) moggaafatee Obboo Dhugaasaa Bakakkootiin hogganmaa aka turen yaadadha. Rakkoo keessaa beekuu baadhullee, akka dubbatamaa turetti sababni addaan bahinsaa waan kaayyoon ganamaa sun cabeef ykn jijjiirameefi jedhama. Akka naaf galetti kaayyoo ganamaa kan jedhamu sun Walabummaa Oromiyaa mirkaneessuu fi Mootummaa Birmadummaa Oromiyaa ijaaruu natti fakkaata.
1.1. Kaayyoon sun maaliif jijjiirame ykn cabe? Eenyutu jijjiire?
Ani akkan yaadutti rakkoo keessaa kan ani hin beekne ykn rakkoolee dhuunfaatu jiraatanii ta’a malee, hanga yeroo sanaatti kaayyoos ta’ee sagantaan ABO waan jijjiirame natti hin fakkaatu. Wanti fooyya’ellee yoo jiraate, akka himamaa turetti bara 2004 kora ABO sadaffaarratti wanti tokko tokko jijjiiramanii ta’uu danda’a. Kanaafuu, sababa dhuunfaa kan namoota jidduutti uumameen yoo ta’e malee, kaayyoo laalchisee wanti ifatti beekame hin jiru jechuu kooti. Yoo rakkoo namootaa ta’e immoo, gaafiileen: Eenyutu rakkoo sana uume? Maaliif rakkoon sun uumame? Sana hundaafuu eenyutu ittigaafatama? kan jedhan waan seenaaf taa’anii dha.
Sababni addaanbahinsa sanaa kan ta’es ta’u, warri addaan bahanii turan sun yeroo dheeraa booda araaramneetii, deebinee tokko taane jedhanii beeksisan. Kan nama gaddisiisu garuu tokkummaan sunis yeroo dheeraaf osoo hin turin, hoggansa ABO QC duraanii keessaa namootni tokko tokko ammas deebi’anii kophaatti bahuudhaan, garee biraa uuman. Gareen kunis ABO Obboo Galaasaa Dilbootiin hogganamuu dha jedhamee beekama. Kuni maaliif ta’e? Ammas kaayyootu cabee? Sagantaatu jijjiiramee? Akka natti fakkaatutti, amma dhugumatti sababa dhuunfaatu jira amantaa jedhutti nama geessa. Maaliif yoo jedhame, akka dhagahamutti, hunduu waanuma bilisummaa uummata Oromoo fi walabummaa Oromiyaatiif qabsaa’an fakkaata. Kana jechuun immoo kaayyoon isaanii tokkuma jechuu dha.
1.2. Bara 2008 addaanbahinsi lammataa maaliif uumame? Sababni isaa hoo maali?
Akkuma yaadatamu, erga addaanbahinsi kun uumame booda mooraa QBO keessatti gareeleen kun walirratti duulaa akka turan gaddisiisaa ta’us seenaa Oromoo keessatti bakkee qabatee jira. Warri maqaa “ABO Jijjiiramaa” moggaafatanii kophaatti bahan sun jalqabarra dhugumatti waan jijjiirama guddaa tokko fidan fakkeessanii, hawaasota Oromoo biyya alaa jiran amansiisuu yaalanii turan. Nan yaadadhaa, gareen kun Onkoloolesa bara 2009 maqaa “Tokkummaa qabsaa’otaa, gurmuulee fi jaarmayoota Oromoo” jedhuun Tokkummaa tokko uumanii turan. Haa ta’u malee tokkummaan sun yeroo dheeraa waan ture natti hin fakkaatu.
Sun kanumaan osoo jiruu, sababa hinbeekamneen gareen kun deebi’ee bakkee lamatti bahuudhaan; gareen tokko “Jijjiirama” yoo jedhamu, kan Generaal Kamaal Galchuutiin hogganamu uumame. Gareen biraa maqaa ABO Koree Yeroo (ABO KY) jedhamu kan moggaafate yoo ta’u kan Obboo Ibraahiim Muummeetiin hogganamu ture. Osoo hin turin garee Jijjiiramaa keessattis ammas rakkoon uumamee, namootni keessaa bahnii jaarmayaa biraa uuman. Jaarmayichi haaraan kun Adda Dimookraatawa Oromoo (ADO) yoo ta’u, kan Obboo Leencoo Lataatiin hogganamuu fi yeroo ammaa kana gara biyyaatti galuuf qophiirra jiruu dha. Warri hafan immoo bara 2012 sagantaa ABO jijjiirree jirra jedhanii labsan. Kana qofaadhaan hin dhiisne; mooraa Habashootaa kessa tumsa uumuuf yaalii godhaa turan.
Habashaanis isaanitti fayyadamtee, warra hafanirratti olola oofuuf miidiyaa isaaniirratti hoggantoota warra Jijjiiramaa afeeranii hasofsiisuu sagantaa godhatan. Haa ta’u malee, tumsi barbaadamaa ture sunis osoo hin milkaayin hafee, warri ABO Jijjiiramaa kan Generaal Kamaal Galchuutiin hogganamu sun Habashootarraa deebi’anii, maqaa haaraas moggaafatanii; sagantaa ykn kaayyoo ABO jijjiirame jedhame sanas bakka duritti deebifne jedhanii; amma kunoo Kallacha Walabummaa Oromiyaa (KWO) jedhamanii beekamu. Egaa, asirratti kaayyootu cabee ree? Kaayyootu mooraa QBO keessatti waliigaltee isaan dhoowweeree? Isa kanatu walitti isaan mufachiieeree? Lakkii, wanti ifaa ifatti mul’achaa jiru rakkoolee biraatu jiru malee rakkoon rakkoo kaayyootii miti. Waanan kana hundaa kaasuuf, fuulduratti waan tokko tokko ibsuuf akka ka’umsa ta’uufi.
Warri ABO jijjiiramaa keessa turan gara ADO fi KWO qofaatti bahanii hin hafne. Gareen biraa tokko immoo maqaa ABO Tokkoome (ABO-T) jedhu qabatanii jiru. Isaan kuni hunduu ADO, KWO fi ABO-T warra bara 2008 ABO Obboo Daawud Ibsaatiin hogganamurraa kophaatti bahanii dha. Durumaanuu maaliif achirraa bahan? Sababni isaa maal ture? Akka booda haasa’aa turanitti, hoggansa ABOto nu hojjisiisuu dide; abbaa-irrummaatu jira waan jedhamu faatu dhagahamaa ture. Dhugumatti ABO Obboo Daawudiin hogganamu keessa rakkoo uummatni Oromoo hin beeknetu jiraa?? Dhugumatti abbaa-irrummaatu jiraa? Isa kanatu gaafii guddaa natti ta’ee, dhimma kana akkan kaasu na taasise.
Qabxiilee lamaan hafanitti osoo hin ce’in dura, barreeffama kutaa itti aanu keessatti hubachuuf akka gargaaru, jaarmayootni Oromoo, kan duraan ABO tokko turani fi amma kophaatti bahanii jiranis ta’ee jaarmayootni bilisummaa Oromiyaa kan biroo akka armaan gadii ti.
A) Warra ABO tokko turan:
ABO Shanee Gumiitiin beekamu kan Obboo Daawud Ibsaatiin hogganamu
ABO Garee Obboo Galaasaa Dilbootiin hogganama jedhamu
ABO-Tokkoome kan jedhamu kan duraan Dr Nuuroo Daddafootiin hogganamaa ture fi amma Obboo Abbaa Nagaa Jaarraatiin hogganamu
KWO kan Generaal Kamaal Galchuutiin hogganamu
ADO kan Obboo Leencoo Lataatiin hogganamu
B) Tokkummaa Humnoota Bilisummaa Oromiyaa (THBO – ULFO)
Isaan kun jaarmayoota duraan kophaa kophaa turani fi bara 2010 walittibaqan’ee, jaarmayaa tokko taane jedhan:
AWDO – Adda Walabummaa Dimokraatummaa Oromiyaa, kan Obboo Jaarraa Abbaa Gadaatiin hogganamaa ture
GABUO – Gumii Adda Bilisummaa Ummata Oromiyaa, kan Obboo Sisaayi Ibsaatiin hogganamaa ture
ATBUO – Adda Tokkummaa Bilisummaa Ummata Oromoo, kan General Waaqoo Guutuutiin hogganamaa ture
THBOn yeroo ammaa maalirra akka jiru wantin beeku hin jiru. Erga bara 2010 as waayee isaanii quba hin qabu jechuu kooti.
Qabxiilee lamaan hafan barreeffama kutaa itti aanu keessatti qabadheen dhiyaadha.
← Ethiopia: Government must protect victims of escalating ethnic attacks The UN General Assembly on Friday elected South Africa, Indonesia, the Dominican Republic, Belgium and Germany to serve during 2019-2020 in the UN Security Council. →
የኦዴፓ፣ አዴፓ እና አብን የተደበቀ ውስጣዊ ትስስርና የፖለቲካ አሻጥሮች May 6, 2019
SBO Sagalee Bilisummaa Oromo, Caamsaa 5, 2019 May 5, 2019
Sidama declares state of impatience May 5, 2019
Lafarraa dhumnee banna malee dhugaa hin dhoksinu – Gochaa Suukkanneessaa – Laaloo Asab May 5, 2019
Seife Nebelbal Radio, Interview with Dr. Gizachew, May 5, 2019 May 5, 2019
RSWO – Tarkaanfii WBOn Ona Gullisoo Keessatti, RIB irratti Fudhate, Caamsaa 4, 2019 May 4, 2019
SQ Sagalee Qeerroo Bilisummaa, Caamsaa 04 2019 Kibba Oromiyaa Godina Gujii Lixaa keessatti wa May 4, 2019
OPDOn Subboonummaa Oromoo Ajjeessuu fi Ajeessuuf Wixxifachaa Jirti! May 4, 2019
የኦሮሞ የነፃነት ትግል (ኦነት) ከየት ተነስቶ ወዴት እየሄደ ነው? ክፍል ሶስት May 4, 2019
SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Caamsaa 3, 2019 May 4, 2019